Home / Blog / Leaky Faucet? Rusty? Mihisatra ve ny rano? Tanana amin'ny fomba fanamboarana azy
2020 / 10 / 21 FisokajianaBlog 2208 0
Ahoana ny amin'ny sioka voadio?
/ Fandrefesana tsy mahasakana /
Faucet izay miasa 365 andro isan-taona, indrindra fa ny iray izay mampiasa rano mafana tsy tapaka, dia tsy maintsy hivangongo amin'ny limesales. Rehefa mandeha ny fotoana, ny rano mivoaka avy ao amin'ny faucet dia mihakely sy mihakely, izay misy fiatraikany lehibe amin'ny traikefa amin'ny fampiasana ny fantsona.
Mampiasà baoty landihazo skimmed fotsiny, atsobohy amina vinaingitra fotsy kely ary apetaho amin'ny faucet mandritra ny 5 minitra.
Rehefa afaka 5 minitra dia sokafy indray ny faucet dia jereo fa tonga dia lehibe kokoa ny fikorianan'ny rano ~.
/ Tsy manakana loha loha /
Betsaka ny fandroana an-trano namana tsy mamokatra rano milamina rehefa avy nampiasa azy ireo nandritra ny fotoana kelikely. Tsy azon'izy ireo atao akory ny mankafy ny fiononan'ny fandroana tsara ~.
Avia manandrana vinaingitra fotsy kely ao anaty harona plastika ary fonosy mandritra ny 30 minitra ny lohan'ny fandroana. Ny lohan'ny fandroana dia ho tsara tahaka ny vaovao ~!
/ Milentika tsy manakana /
Milentika tsy nahy? Aza manahy, aidino vinaingitra fotsy sy soda amin'ny vata fampangatsiahana ao anatin'ny 1: 1, mifandimby.
Afaka iray minitra latsaka dia afaka tsy voafatotra avy hatrany ilay filentehana, tsy maloto tanana ny lakile oh.
Ny fiovan'ny faucet dia mijery lavitra
/ Manamora ny fidirana amin'ny rano /
Kely loatra ilay famaohana ary tena tsy maninona ny mampiasa siny lehibe hisamborana ny rano.
Manampia angady kely na tavoahangy plastika lehibe eo alohan'ilay faucet fotsiny dia afaka misambotra ny rano ianao ~ tsy ho resy oh.
/ Mora hosasana tanana /
Raha lavitra be ao an-trano ny faucet dia tsy mety ny manasa tanana. Azonao atao ny mamaha ity olana ity amin'ny alàlan'ny fanovana kely ireo tavoahangy plastika efa niasa.
Sasao ny tavoahangy plastika taloha ary tapaho ny ambany.
Apetaho eo amin'ny faucet avy eo ilay izy sao mila miondrika rehefa manasa tanana! Izy io koa dia manakana ny famaohana rano.
/ Hanosotra-Famantarana /
Ny sasany amin'ireo sakaizantsika dia mampiasa faucet efa taloha ao an-trano fidiany any an-trano, izay apetraka ambony sy manaparitaka ny vatany rehetra raha tsy mitandrina izy ireo. Mampianara fika, tavoahangy plastika afaka mamaha ny olana.
Voalohany, asio marika ny tapany ambony amin'ny tavoahangy plastika ary avy eo tapatapio amin'ny fitaovana iray.
Transcripts: Hanamarika ny tavoahangy plastika aloha izahay. Hetezo amin'ny fitaovana avy eo.
Transcripts: Note: ny toeran'ny peratra vava dia azo tapahina na tsia, arakaraka ny haben'ny faucet. Aorian'ny fanapahana dia mampiasa hety isika hananganana ny sisiny masiaka (hisorohana ny fanapahana tanana).
Manaraka, apetaho amin'ny faucet ny fonon-tavoahangy plastika vita.
Transcripts: Napetrakay teo ambonin'ny faucet ny tavoahangy plastika notapatapahina.
Ampinga faucet tsotra no hanao azy, mba hisy arofanina ny fikorianan'ny rano, rehefa tsy hisoroka ny fanasana zavatra, fa mba hifehezana ihany koa ny làlan'ny rano mikoriana ~ azy.
Transcripts: Izay. Araka ny hitanao dia miolaka ny fikorianan'ny rano ary mora kokoa ny manasa zavatra.
Ahoana ny fomba hanamboaranao ny sioka mitete?
Faucets izay simba ary matetika manana olana ankoatry ny clogs dia mivoaka. Ahoana ny fomba fanamboarana faucet mitete?
Voalohany, sokafy eo amin'ny tampon'ny faucet ny takelaka fisaronana plastika, avy eo ampiasao ny fitaovana hanalana ny visy ao ambaniny.
Transcripts: Rehefa manokatra azy ianao dia mahita ny visy. Nesorinay ilay izy. Esory eo ambonin'ilay fitoeran-faucet ilay takelaka fisaronana plastika.
Raha vantany vao nesorinao ny visy, esory ny fantson'ilay faucet.
Transcripts: Raha vantany vao tsy voavolavola izy dia esorinay ny fantsom-baravarana.
Farany, ampiasao ny fitaovana hanamafisana ireo visy. Matetika dia mivoaka ny faucet satria malalaka ny visy, ka hangeza fotsiny ny visy mba hisorohana ny fivoahan'ny rano.
Transcripts: Raha mbola manenjana azy amin'ny wrench isika dia tsara ny mandeha.
Ahoana no fanadiovana tsara ny fauxet?
/ Midina /
Aza maika ny handraraka ny saosy sisa tavela, atsobohy ny fatran'ny ketchup amin'ny faritra maloto ao anaty fantsona, mijanona mandritra ny 5 minitra, ary avy eo mamafao lamba lena, avy eo ny harafesina dia mandeha tsy misy soritra .
/ Esory ny tasy amin'ny rano /
Hetezo roa ny voasarimakirana ary ampiasao hamafana ilay faucet. Tsy ampy 2 minitra dia madio sy mamiratra avy hatrany ny faucet!
Previous :: Fianakaviana sinoa, tena tsy mendrika fisarahana fahatelo? Next: Fanavaozana ny fitaratra amin'ny fandroana, ny 99% ny olona dia tsy hijery ity antsipirihany ity